Woyyaaneen ufiin hin beektu itti himan ammoo hin dhageettu - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Woyyaaneen ufiin hin beektu itti himan ammoo hin dhageettu
Woyyaaneen ufiin hin beektu itti himan ammoo hin dhageettu
Jemal Gudisa | Murtee kana irra akka gayaniif kan murna Woyyaanee dirqe sochii Oromooti jedhu taajjabdonni.
Mootummaan Itoophiyaa lafa qonnaa yeroo hin murtoofneef ‘abbootii qabeenyaatiif’ hiruu dhaabuu isaa ifa godhe. Labsiin kuni kan dhufe ummanni lafa isaa irraa hedduminaan buqqa’us, namoonni maqaa investimentiin lafa qonnaa saaman garuu lafa fudhatan misoomuu dadhabuun isaanii waan mirkanaayeef. Akka fakkeenyaatti, dhaabbanni biyya alaa tokko lafa heektaara 100,000 woggaa torba dura fudhate keessaa hanga ammaatti kan qotuu danda’e lafa heektaara 1,200 qofa.
Sababni mootummaan ifatti laate investaroonni lafa misoomsuu diduu ykn dadhabuu kan jedhu ta’us, hiriira mormii maaster pilaanii Finfinnee hordofee Oromoon osoo addaan hin kutin geggeesse mootummaan irra deebiée imaammata lafa gurguruu, yeroofis taú, akka xiinxalu isa dirquu hin oolle kanniin jedhan jiru. Hanga yeroo qabsoon Oromoo cimaan isa mudateetti, imaammata lafaa kana akka jijjiiruuf waamicha isaaf godhamaa ture mootummaan Woyyaanee tuffiin bira dabraati kan ture.
Mootummaan Itoophiyaa woggoottan muraasa dabran keessatti lafa qonnaa heektaara miliyoona 3.6 kan ‘abbootii qabeenyaa’ biyyaa fi biyya-alaa 5700 kan laate. Heektaaratti qarshii 20 kaffalaati kan lafa saaman.
Mootummaan Itoophiyaa ummata lafa irraa buqqisaa abbootii qabeenyaatiif heektaara miliyoona heddu kan raabse abdii omisha guddisuu fi sharafa biyya-alaa argamsiisuu jedhuu. Kuni hundi akka hin taane, aabjuu taúu isaa, jalqabumaa dubbatamaa ture.
Imaammanni lafa gurguruu kuni qotee-bulaa buqqisuu, biyya hiyyoomsuu fi qabeenya uumamaa mancaasuun alatti faaydaa tokko akka hin qabne jalqabumaa mootummaa Woyyaaneetti himamaa ture; qaamota biyya keessaa fi kanniin biyya alaatiinis. Woyyaaneen gurra gorsa hayyootaa fi xiinxallitootaa ittiin dhageettu hin qabdu ture. Inumaa hedduu nammota imaammata kana mormanii kan mudate ajjeefamuu, hidhamuu fi doorsisamuudha. Dhimma saamicha lafaan wolqabatee balaan Oromomiyaa fi Gambeellatti lammii irra gaye hedduu cimaa ture.
Saamicha lafaan wolqabtee badiin ummata irratti raawwatame heddu. Kana boooda fala kan taúu qabu lafa ummataaf deebisuudha. Yakka lafa irraa buqqaúu, jireenya dhabuu, ajeefamuu fi hidhamuuf ummata mudateefis beenyaan kaffalauudha qaba. Tankaarfiin kanaa gadii kamu tooftaa mootummaan rakkoo amma isa mudate kana keessaa itttiin bayuuf tolfate malee tankaarfii rakkoo ykn dogoggora uumame sirreessuuf fudhatame taúu hin dandaú.
Previous articleJaarmayaaleen Oromoo waliin hojjachuu danda’uu qofa kan Oromoo injifannotti geessu
Next articleRakkoo Oromiyaa keessatti uumame furuudhaaf mootummaan marii siyaasaaf haala mijeessuu, humnatti dhimma bayuu dhiisuu qaba jetti Ameerikaan